Ifekthri lokuqoqa izintuli | I-China Abaqoqi Bothuli Abenzi, Abahlinzeki
Inhlangano yenqubo yokuvikelwa kwemvelo
Amasistimu wokuvikelwa kwemvelo Uthuli Luyaqoqa Into enhle kakhulu (umjuluko) okhiqizwa ukushisa okuphezulu ayelashwa futhi ayikhishwa ngqo ngaphandle kwenhlangano, engcolisa kakhulu imvelo yomkhathi. Umsizi uqukethe inani elikhulu lezinsimbi ezisindayo, futhi ukuhogela ngokweqile kuyithinta kabi impilo yomuntu.Kukhona nengozi yokuqhuma othulini oluhle kakhulu. Ngokuya ngezimo zokusebenza kukalimi we-lime okhiqiza uthuli, isishingishane sokususa uthuli w ...
Uthuli oluqukethe i-flue gas kuqala lungena kumqoqi wothuli lwesishingishane, izinhlayiya ezinkulu zothuli ziwela ezansi kwesigaxa ngokujikeleza kwe-centrifugal, ukuze izinhlayiya ezinkulu zothuli zisuswe.
Isikhwama sohlobo Lokuqoqa Uthuli
Ngemuva kokuphuma kokuncibilikiswa komswakama wegesi oluthambile, igesi equkethe uthuli ingena kumqoqi wothuli lwesikhwama. Ngokuhlungwa kwesendlalelo kwenetha lesikhwama, uthuli olunezinhlayiyana ezincane lusele esikhwameni ukufeza umphumela wokususa uthuli olunezinhlayiyana ezincane.
I-desulphurizer yefilimu lamanzi
Ugesi nothuli lwesulphide flue kugeleza kusuka kusihlungi sesikhwama kungena embhoshongweni oyindilinga.
Isikulufa-uhlobo samandla omoya
Ngokusebenza kwayo okuphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu, ukunakekelwa mahhala nezinye izinzuzo, Intulo yomoya compressor ngokungaguquki inikela ngekhwalithi ephezulu yomoya onamandla kuzo zonke izizinda zokuphila.
Okufakiwe kokufakwa kwabalandeli okusalungiswa
I-fan esalungiswa esetshenzisiwe isetshenziselwa ukukhipha i-flue gas flue gas esithandweni somlilo, esisetshenziselwa kakhulu ukungena komoya nomoya kuma-boilers nakumafektri ezimboni.